कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु; महामन्त्री खड्का उपसभापति बन्ने | Karnali Post
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु; महामन्त्री खड्का उपसभापति बन्ने
काठमाडौं। ‘उत्साह, एकता, रूपान्तरण : सफल बनाऔँ १४औं महाधिवेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आजबाट राजधानीमा सुरु हुँदैछ। शुक्रवार दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन उद्घाटन हुनेछ।
महाधिवेशनको सन्निकट आइपुग्दा पनि काँग्रेस नेताहरूले पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी चयन गरिसकेका छैनन्। नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेर बहादुर देउवा पक्ष र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष प्यानलनै बनाएर निर्वाचनमा जाने निश्चितप्रायः छ। संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षमै पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएपछि दुवै समुहले आफ्नो टिम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। संस्थापन इतर पक्षमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता शेखर कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन पक्षमा भने सभापतिमा वर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवा मात्रै देखिएका छन्। यद्यपि संस्थापन पक्षबाटै बाहिरिएर उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
महामन्त्री खड्का अब उपसभापति
संस्थापन पक्षबाट महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का उपसभापति बन्ने भएका छन्। यद्यपि खड्काले औपचारिक रुपमा आफ्नो मुख भने खोलेका छैनन्। १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशनबाटै आफ्नो सक्रियता देखाएका खड्काले कर्णाली प्रदेश अधिवेशन सम्मको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाको बलियो साथमा रहेका खड्का उपसभापति बन्ने निश्चित रहेको खड्का निकट नेताहरू बताउँछन्।
काँग्रेसभित्र निर्विवाद र प्रिय नेताको छवि बनाएका खड्का संस्थापन इतर समुहका नेता कार्यकर्तामाझ पनि प्रिय छन्, त्यसैकारण पनि अन्य पदमा रस्साकस्सी हुँदा समेत उपसभापतिमा खड्काले निर्धक्क जित्ने उनी निकटहरु बताउँछन्।
को हुन खड्का?
महामन्त्री खड्काले २०३१ सालबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका हुन्। उनी २०३४ सालमा २४ वर्षकै उमेरमा कांग्रेसको सुर्खेत जिल्ला सभापति भएका थिए।
पञ्चायतकालमा बहुदल र निर्दलबीचको चुनावमा कांग्रेसले भाग लिने निर्णय गर्दा खड्का वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए। यद्यपि उनले ६ महिना भन्दा बढी समय काम गर्न पाएनन्।
महामन्त्री खड्काले २०४८, २०५१ र २०५६ मा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट लगातार संसदीय चुनाव लडेर सांसद निर्वाचित भएका थिए। २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य भएका खड्काले २०७० सालमा भएको दोश्रो संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ लडेर जित हात पारेका थिए। महामन्त्री खड्का २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा भने बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार ध्रुव कुमार शाहीसँग पराजित भएका थिए।
सुर्खेत क्षेत्र नं. १ मा आफूलाई ‘विकासप्रेमी नेता’ का रूपमा चिनाएका खड्का दुईपटक गृहमन्त्री दुईपटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री , सञ्चारमन्त्री र उद्योग वाणिज्य मन्त्री भैसकेका छन्।
काँग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य जितेर सहमहामन्त्रीमा मनोनित भएका खड्का १३ औं महाधिवेशन पछि महामन्त्रीमा मनोनित भएका थिए।
Previous articleकर्णालीको कृषि प्रसार सेवामा नयाँ फड्को
Next articleकाँग्रेस महाधिवेशनः उपसभापतिमा खड्का, गुरुङ, भण्डारी र गच्छदारको कडा टक्कर